तपाईले चाहनु भयो भनि यी चेलीको जीवन बन्न सक्छ ! (मार्मिक भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
तपाईले चाहनु भयो भनि यी चेलीको जीवन बन्न सक्छ ! (मार्मिक भिडियो सहित)
ScotNepal July 5, 2018
एउटा चेली भित्र केहि गर्ने जोश र जागर हुदा हुदै पनि यो कस्तो बाध्यता उनि अगाडी बढ्न सक्दिनन? तपाई चाहनु हुन्छ भनि यी चेलीको जीवन बन्न सक्छ एकछिन भिडियो हेर्नुहोला ! तपाई को सहयोग भनेको एक शेयर हो सहयोगी मन आफै तानिने छन् !
यस्तो मेरो दुखदायी अबस्थामा सबैलाई सहयोगको अपिल गर्दछु,
हरेक दुख लाई सामना गर्दै, मनका पिडाहरु लुकाउदै अहिले यो स्थान सम्म पुगे कि छ । अनेकौँ पिडा दुखहरुको संघर्ष गर्दा गर्दै बिभिन्न समस्याले नै अघि बढन सकि रहे कि छैन, कारण हरेक आबश्यकता र समस्याको मलम भने कै आर्थिक रहेछ । जति दुख त जब मैले एउटा खुट्टा गमाए तब देखि नै पिडा को सिकार नै बने ।
घरमा भए जती त्यहि उपचारमा नै सकियो,अन्नतःएउटा खुट्टा समेत रहेन । जिबन यति कै मा अपागंमय भयो । त्यस बेला देखी जब त्यो समस्याको खातिर भए तब देखि नै जिवन एउटा निकै संघर्षमय,दुख दायी बन्यो । उपचार तथा बिभिन्न समस्यामा नै घरमा भए जती सबै सकियो,अनी परिवारमा एक किसिमको चुनौती आई लाग्यो । त्यो संगै आफ्ना अमुल्य सपना बोकेर अर्थात एउटा खुट्टा गुमाई सकेपछि पनि काठमाण्डौं आए । अध्ययन सुरु गरेर दख दुख नै जिवन चलाउन थाले,गाउँमा भाई बाबा,आमा सबै छोडेर काठमाण्डौं आए पनि दुख बल्जी नै रहे। त्यसैले एउटा मात्र खुट्टा संग पनी जिवन जिउन धौ धौ नै भई रहयो ।
अहिले कलेज जिवन बिताउदै छु,एउटा मात्र खुट्टा ले पनि केहि गर्छु भन्ने आट छ तर जति आबश्यकता छन ती आबश्यकता कै बिचमा बाच्नु परेको छ ,पिडा नै पिडाको यो जिवनमा केहि गर्न निकै नै गार्हो परेको छ ।त्यसैले अहिले सबै सामु सहयोग माग्न बाध्य भए कि छु ,म अझै एउटा मात्र खुट्टा ले पनि केहि गर्न चाहान्छु ,त्यसैले मलाई तपाईहरुको सानो सहयोग मेरा लागी जिवनको अध्याय बन्ने छ ।र म एउटा मात्र खुट्टाले पनि नाचेर केहि गर्न चाहन्छु ,तपाईहरुले सक्दो आर्थिक र नाचको लागी सक्दो सहयोग गरिदिनको लागी सबैमा अपिल गर्दछु ।
सहयोगी मन नजीक पुराईदिनुहोस् सक्दो सहयोग गरिदिनुस र शेयर गरिदिनुस
Shristi Shrestha, Siddhartha bank
Account number : 01715340591
Phone number : 9812194230